Sitemap-Shenzhen Dengfeng Power Co. , Ltd.
LED 3w ~ 10w အရေးပေါ်ပါဝါအထုပ် --DF168N | LED အရေးပေါ် Max25w အရေးပေါ်ပါဝါ pack များ - DF168H | 2.LED 8w ~ 25w အရေးပေါ်ပါဝါ Packs - DF168H | 3.LED 26w ~ 36w Emergency Power Packs - DF518H | 4.LED 36w ~ 60w Emergency Power Packs - DF518H50 | 55L ~ 90w Emergency Power Packs - DF518H100 | 6.LED 90w ~ 300w Emergency Power Packs - DF518H150 | LED မျက်နှာကျက် / panel / Downlight power supply အတွက်အရေးပေါ်ပါဝါထုပ်ပိုးမှု
LED Max 40w အရေးပေါ်ပါဝါအထုပ်များ - DF518S | LED Max 50w အရေးပေါ်ပါဝါ Packs - DF268C | LED Max 60w အရေးပေါ်ပါဝါ Packs - DF518T | LED Max 100w အရေးပေါ်ပါဝါ Packs - DF168-30H | LED Max 200w အရေးပေါ်ပါဝါ Packs - DF168-30D | မီးချောင်း 8w-58w မီးအိမ်အရေးပေါ်ပါဝါထုပ်များ - DF338 | Led Redued Power Emergency Power Pack Max 60w အရေးပေါ်ပါဝါထွက်ရှိမှု | LED Strip Lights အတွက် ၅ နှစ်အာမခံ LiFeO4 ဘက်ထရီ
LED အရေးပေါ်ပါဝါ Pack များ Max 10W - DF618H | LED အရေးပေါ်ပါဝါ Pack များ Max 24W - DF628H
DF518T မြောက်အမေရိကစျေးကွက်ဒီဇိုင်းအရေးပေါ်ပါဝါ Kit ETL ခွင့်ပြုချက် | DF518T စီးရီး
50W LED အရေးပေါ်ပါဝါမော်ဒယ် DF168-30HD နှင့်အတူ 100W 2hours ဘက်ထရီ Backup ကို | အရေးပေါ်အလင်းပြန်အားသွင်းအမျိုးအစား 40W အရေးပေါ်ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီ | 80W Super Power အရေးပေါ်အလင်းရောင်ထောက်ပံ့မှု | 90W LED အလင်းအရေးပေါ်ပါဝါ pack ကို | Led အရေးပေါ်အလင်းရောင်ကူးပြောင်းခြင်းပစ္စည်းများ 28W အရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit | 7w LED Emergency Inverter Kit | 32w အရေးပေါ် Inverter Kit LED | 40w LED Emergency Inverter Kit | 36w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle | 28w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle |2* 20w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle | 18w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle | 12w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle | 7w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle | 6w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle | အရေးပေါ်အလင်း Led စျေး 5w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle | 3w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle | 4w အရေးပေါ်အလင်းရောင် Moudle | Led 45w LED အတွက်အရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit အတွက်အရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit | Led အရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit 36w LED အရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit | Led အရေးပေါ်အလင်းကူးပြောင်းခြင်း Kit 40w LED အရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit | Led အရေးပေါ်အလင်းစျေး 100w LED အရေးပေါ် Module ကို LED | 48w အရေးပေါ် Module ကို LED | 12w အရေးပေါ် Module ကို LED
40w ~ 200w 50% Power Emergency Module နှင့်အတူ | 50% Power Emergency Module နှင့်အတူ 3w ~ 18w | 10w ~ 40w 50% Power Emergency Module နှင့်အတူ | 15W မှ 15W အထိအရေးပေါ် Module ကို LED | 16W အထိ 8W LED အရေးပေါ် Module ကို | 7W သို့ 7W အထိအရေးပေါ် Module ကို LED | 9W အထိ 9W LED အရေးပေါ် Module ကို | 10W အရေးပေါ်ပြောင်းလဲခြင်း Kit မှ 20W Down | 75W အထိ 75w Self-Test အရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit ရန် | 40W အထိ 40W အရေးပေါ် module သို့ | 20W မှ 20W အထိအရေးပေါ် Module Power Supply အထိ | 24W Emergency Convversion Kit သို့ ၂၄ နာရီအထိ
DF518T-72 အမေရိကန်စံ LED အမြဲတမ်းပါဝါအရေးပေါ်ယာဉ်မောင်း output ကို 10W 90MINS | DF518T-36 Led Emergency Driver ETL UL924 လက်မှတ်ထုတ်လုပ်မှု 5W 90MINS | LED အရေးပေါ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေး 268C-3W-5W, မီးသတ်အရေးပေါ်အလင်းသုံး Power Supply Lighting3နာရီ | Ip65 ရေစိုခံသော LED အရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit သည်ရေစိုခံ 60w သို့ 20w သို့ | Ip65 Tri Proof Led Light IP65 LED Tri-Proof Light 60w ကို 20w Emergency Lighting သို့ခေါ်သွားသည် | 50W LED အရေးပေါ်ပါဝါစနစ်၊ LED ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အရေးပေါ်ကိရိယာ ၁-၁၀% အရေးပေါ်အလင်းနှင့်အတူ | LED မီးအလင်းနှင့် 20W Down 6W 3hours နှင့်အတူ LED အရေးပေါ်အလင်း Kit | 21W Down မှ 7W 3hours အထိ Lithium Battery ကိုအသုံးပြုထားသော LED Light သည် | LED မီး 25W သို့ 8W 3hour အထိအရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်းကိရိယာ | LED မီး ၃၀W မှ ၁၀ နာရီ ၃ နာရီအထိအရေးပေါ်ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည့်အလင်းရောင် | 12W အရေးပေါ်ပါဝါနှင့်အတူ 40w များအတွက် T5 T8 အရေးပေါ်ချောင်းအင်ဗာတာ | 2w အရေးပေါ်အလင်းပါဝါ Backup ပစ္စည်းများ, LED Lamp 5w ~ 30w အတွက်အရေးပေါ်ကိရိယာ | အထူးသဖြင့် LED မီးလုံး 5w ~ 30w အတွက် 3w LED Emergency Kit / Emergency Power Pack | 12w အရေးပေါ်မီးနှင့်အတူအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်အရေးပေါ်ယာဉ်မောင်း Module 36w Panel ကိုအလင်း | 16W အရေးပေါ်အလင်းရောင်နှင့်အတူ 48W ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ LED Panel ကိုအလင်းအိမ်များအတွက်အရေးပေါ် Kit | ၃၀% အရေးပေါ်အလင်းရောင် 8w အတွက် 24W ​​LED Panel အတွက်ဘက်စုံသုံးအရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit | အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရေးပေါ် LED အင်ဗာတာကိရိယာများသည် ၂၈ နာရီမီးလုံးအတွက် 8w အရေးပေါ်အလင်းရောင်နှင့်အတူ | 30w DC Output 10w Emergency Lighting ဖြင့် 30w အရေးပေါ် Panel Light Power Kit
အသေးစားအရေးပေါ်အလင်းရောင်ပါဝါနှုန်းဖြင့် LED Tri-Proof အလင်းအတွက်အရေးပေါ်အလင်းရောင် Module | ထိန်းသိမ်းထားပြီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသောအရေးပေါ်မီးများမထိန်းသိမ်းရသေးသောသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားသော LED မီးခိုးမျက်နှာကျက်မျက်နှာကျက်အလင်းရောင်အတွက်အထုပ်။ | 30W LED အရေးပေါ်ယာဉ်မောင်း, LED စွမ်းအင်ချွေတာသောအရေးပေါ်ကိရိယာ 3W 3hours အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်နှင့်အတူ | LED Emergency Kits Inverter ကို DC Output ဖြင့် 4W 3Hours ဖြင့် 12w Fluorescent Lamp အတွက် DC Output နှင့်အတူ | LED Down Light နှင့်အရေးပေါ်အလင်းရောင်အတွက်အရေးပေါ်မီးပါဝါ 3W 3Hours သို့အရေးပေါ်အလင်းသို့စွမ်းအင်ထည့်ပါ
Led Tri-Proof Light အတွက် CE Certificate Emegrency ကို Downlight ပေးခဲ့သည် | ရေစိုခံဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ UFO အလင်းအတွက် LED အရေးပေါ်ပါဝါ pack များ | IP66 Ip65 ထက်ပိုကောင်းသည့် IP65 ရေစိုခံ LED အရေးပေါ်ကူးပြောင်းခြင်း Kit 40w အပြင်ဘက်တွင် LED မီးများ | Water and Dust Proof လမ်းသည် 90W3Hour အရေးပေါ်အလင်းရောင် Module LED | IP66 Ip65 High Power ထက် 30W အပြင်ဘက်တွင် LED မီးများအတွက်ရေစိုခံအရေးပေါ် Module ထက်
Dengfeng Company မှ ၀ န်ထမ်းများသည် Jiangxi ပြည်နယ်ရှိ Quannan ကောင်တီ၏မေလ ၁ ရက်အလုပ်သမားတံဆိပ်ကိုရရှိခဲ့သည် | Shenzhen Dengfeng Power Supply Co. , Ltd. Jiangxi Plant ပြီးစီးသည် | Dengfeng တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်း ၂၀၁၁ ပြပွဲကိုအောင်မြင်စွာတက်ရောက်ခဲ့သည် | Shenzhen Dengfeng Power Supply Co. , Ltd ။ အောင်မြင်သောပြပွဲကို LED Expo Thailand 2019 တွင်ပြသထားသည်
LED အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအတွင်းပိုင်းဇာတ်လမ်းကိုသရုပ်ဖော်သည်။ | အလင်းရောင်လုပ်ငန်း၏အထွေထွေလမ်းကြောင်း | မျက်နှာကျက်ကို LED မီး ၂၉၀၀၀ နှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အံ့သြစရာပဲ! | LED Lighting စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများလေးခုအဆောက်အ ဦး | High Power ၏အပူစီးကူးမှုပထမ Nylon ကို LED | မြင့်မားသောစျေးကွက်မှထွက်ပေါ်လာသော LED Lighting လုပ်ငန်း | LED Lighting ထုတ်ကုန်များသည်ဂျပန်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရန် | အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည် | မီးအိမ်ပြingနာများ | Modern Media ဆိုသည်မှာ LED သည်အင်အားစုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံကိုပြသသည် | အရေးပေါ်အလင်းများအလုပ်လုပ် LED | LED fluorescent lamp lamp အရေးပေါ်အထောက်အပံ့ | အထူးမီးအရေးပေါ်အလင်းရောင်အရေးပေါ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေး | လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီနှင့်နီကယ် - ကတ္တီမီယမ်ဘက်ထရီများမည်သို့ကွာခြားသနည်း။